Na mbata nke ụdị ọhụrụ oyi Mujjo gloves | Akụkọ akụrụngwa
Ugbu a oyi dị na mba anyị, otu akụkụ nke a ga-ekpuchi nke ọma bụ aka, mana n'ezie, anyị na-emetụ ụdị mmetụ aka ọ bụla na ekwentị anyị ma nwee ogwe aka nwere ike ịbụ nsogbu maka ojiji ha. . O bu ya mere iji banye dika Mujjo, ha ejirila ụdị uwe a na-arụ ọrụ ogologo oge iji kpuchido aka anyi site na oyi ma kwekwa ka ojiji mmetụ nke ngwaọrụ ọ bụla, ama ma ọ bụ mbadamba.
Uwe ndị a na-agbakwunye n'etiti akwa mkpuchi a akwa nke etinyere na ọgwụgwọ na-eduzi nke ọma na-agbaso ibe ya ma na-eme ka ọrụ gloves zuru oke. Ọkachamara dị mma anyị nwere ike iji mgbe ezigbo oyi na nke doro anya anyị agaghị ewepụ iji ekwentị anyị ma ugbu a, eji ihe mmetụta ihu na-arị elu na-ejiwanye ala.
Eziokwu bụ na anyị na-echekwa ọgbọ ọhụụ nke gloves ka a na-emewanye ka ha zuo oke ma na-agbakwunye "mkpịsị aka ọzọ" na njikwa nke ngebichi ahụ. Ana m ekwu nke a n'ihi na ọtụtụ ụdị aka dị iche iche nke ụdị a na-agbakwunye mkpịsị aka abụọ maka iji ama ma ọ bụ mbadamba, na nke a, anyị nwere njikwa na ha niile na mgbakwunye na njide dị ukwuu maka ekele na agbụ nke ụdị silicone ha na-eme ngwaọrụ anyị adaghị ma ọ bụ sipụ n'aka anyị.
Mujjo maka ndị na-amaghị na ọ bụ ụlọ ọrụ Dutch nke na-arụpụta ngwa maka ekwentị, laptọọpụ, mbadamba na ngwaọrụ ndị ọzọ maka afọ ole na ole. Branddị ahụ malitere njem ya iji kwado nchedo ngwaọrụ anyị na aka anyị site na ntinye nke uwe aka na-emetụ n'ahụ. Oge nke a emetụ aka nwere ike ịbụ ezigbo onyinye maka ezumike ahụ ma ọ bụ maka ndị ike gwụrụ ịnwe iwepụ ma tinye uwe aka n'oge ọ bụla ha chọrọ imetụ ekwentị ahụ aka, ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ahụ ji ewepụta ụdị ọhụrụ maka katalọgụ ngwaahịa ya sara mbara.
1 Ogo nke ihe eji emeputa ihe
2 Ogo nha
3 Ọnụ ego na nnweta
Ogo nke ihe eji emeputa ihe
Anyị enweghị ike inwe obi abụọ oge ọ bụla maka akụrụngwa eji ngwaahịa ngwaahịa nke ụlọ ọrụ Mujjo. N'okwu a ọ bụ banyere uwe aka yiri nke ndị anyị nwere ike ịhụ taa ka a na-akpọ neoprene, ha pere ezigbo mpe n'agbanyeghị eziokwu ahụ n'ime ha gbakwunye na mgbakwunye nke 3M Thinsulate na-enye anyị ya mere ha dị ọkụ n’ezie. Ọ bụrụ na ị na-achọ uwe aka na-emetụ n'ahụ ma na-ekpo ọkụ, nke a bụ ezigbo nhọrọ.
Roba ha nwere n'akụkụ elu nke na-ejide uwe aka na nkwojiaka na nke anyị nwere ike ịhụ aha aha ụlọ ọrụ ahụ na-emezigharị n'ụzọ zuru oke iji gbochie oyi, ọ bụghị ma ọlị buru ibu na usoro nke ogologo na-enye nsogbu n'ihe banyere yi a jaket na a nnọọ uko cuff n'ihi ya, na ha bụ n'ezie ala. N'ozuzu, ọ bụ uwe dị mma, ọ bụ ezie na ụdị a bụ otu n'ime mgbanwe kachasị na ọnụahịa ha nwere na Mujjo.
Otu n’ime ihe kacha masị m banyere uwe aka ndị a bụ doro anya na ha bụ conductive Njirimara iji ihe ọ bụla ihuenyo mmetụ, ma ọ nwere a n'obi iko n'echebe ma ọ bụ yiri. Mujjo na-agbakwụnye akwa etinyere na ọgwụgwọ na-eduzi nke ọma ka anyị wee nwee ike ịsị na ha maara etu esi eme ọrụ a nke ọma. Anyị nwere ike ikwenye na n'ụdị ndị ọzọ dị na katalọgụ ya, ha na-arụkwa ọrụ n'echiche a ebe ọ bụ na anyị nwere ihe atụ ọzọ dị oke nke na-egosipụtakwa ikike dị egwu, ụlọ ọrụ ahụ nwere mmejuputa teknụzụ capacitive a dị nso.
Mgbe anyị ga-azụta ụdị ngwaahịa a na ntanetị ọ nwere ike ịbụ nsogbu ebe ọ bụ na anyị enweghị ederede doro anya na nha anyị nwere ma ọ bụ kwupụta oke anyị ji. N'okwu a, na mgbakwunye na ịtụ anya na ndị a bụ nha nkịtị, ya bụ, ọ bụrụ na ịnwee otu mkpịsị aka aka na-ajụkarị ndị uwe ojii a, ị gaghị enwe nsogbu, nhọrọ nke lee nha anyi choro karie nke oma site na iji ndebiri na anyị nwere ike bipụta na ulo gi site na webusaiti gi. Nke a na-eme ka oke nha abụghị ihe mgbagwoju anya, ihe dị iche.
Maka nke a na ụdị nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ nha dị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Anyị agaghị enwe nsogbu na nke a ọbụlagodi na anyị nwere nnukwu aka ma ọ bụ obere aka ebe ụlọ ọrụ ahụ nwere nnweta nha niile: Obere (S), Ọkara (M), Nnukwu (L) na Extra nnukwu (XL).
Ọnụ ego na nnweta
Nke mbụ anyị ga-ekwu na n'ahịa dị ugbu a anyị nwere ike ịchọta uwe aka nke ụdị a "capacitive" nke ọnụahịa na ụdị dị iche iche. Anyi kwuru nke oma ogo ngwaahịa ngwaahịa Mujjo karịrị ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya ma n'ihi nke a ọnụahịa dịtụ oke ọnụ, mana ha nwere ụfọdụ nhọrọ dị ọnụ ala karịa na mkpịsị aka dị oke ọnụ ahịa tupu ịzụrụ ụdị uwe ọgbara ọhụụ ọ bụla.
Na nke a price nke Mujjo uwe bụ 49,90 euro na nnweta ha bụ ozugbo na mbupu na ihe karịrị 48 awa site na iji. Anyị kwenyesiri ike na ụdị uwe a nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka ndị niile na-amaghị ihe ha ga-enye ugbu a oge ezumike ekeresimesi na-abịa yana ọnụahịa ahụ adịchaghị oke na-elebara ogo nke ihe eji eme ihe na rụpụta uwe aka ndị a. Nwere ike ịhụ ma zụta ụdị ihe atụ a site na njikọ a na weebụsaịtị gị, na weebụsaịtị ya ị ga-ahụ ụdị ndị ọzọ nke ụdị nke mkpanaka yana ngwaahịa maka nchekwa na nlekọta nke ngwaọrụ anyị dịka ihe mkpuchi maka smartphones, laptọọpụ na ezigbo ngwa ngwa.
Nakwa kwuo na ọnụahịa ahụ nwere ike ịbụ obere ihe mgbochi iji zụta uwe nke ụdị a, mana mgbe ị na-ahụ ka oge si aga, ị na-eyi ha kwa ụbọchị na uwe aka dị ka ọhụụ N'agbanyeghị ojiji, ị na-achọpụta na ulo oru mbo mere bụ n'ezie ezi. Anyị na-ahapụrụ gị obere gallery nke onyogho ndị anyị meworo n'ime uwe aka ndị a.
Ezigbo mma maka oyi
Ọnụahịa ahụ nwere ike iyi ka ọ dị elu maka uwe aka
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Na mbata nke oyi, ụdị ọhụrụ nke uwe aka sitere na ụlọ ọrụ Mujjo pụtara
Foto dị na Beschoi dijitalụ, onyinye dị iche iche maka ekeresimesi
GaNFast: AUKEY ohuru ohuru nke chaja chaja ngwa ngwa